Guriga > safarka Europe > 5 Goobta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'picnic Spot Europe'
Muuqaallada iyo jawiga ku dhex yaal beerta 'Petrin Hill park' ayaa mid ka mid ah sameysa 5 Goobaha ugu fiican ee Yurub. Fadeexad, oo ku yaal magaalada Kayar, Petrin Hill waa garoon cagaaran oo qurxoon oo iska indha tiraya Prague Castle. Petrin waxay bixisaa aragtida ugu quruxda badan ee caasimada, oo waad u fuula laheyd ilaa munaaradda indha indheeynta loogu talagalay run ahaantii aragtiyo muuqaal leh ee magaalada, Daar wayn, iyo buundooyinka.
Petrin Hill waxay ku habboon tahay sawirada Yurub dhexdeeda guga, dayrta ama xagaaga. Caleentu way eegi doontaa yaab leh dayrta guga iyo xagaaga dhammaan dhirtu iyo dhulku way ubxin doonaan oo midab cagaar leh. Kaliya iskaga qaad qoorta qaar ka mid ah miraha ka soo baxa Bakhaarka Fanka oo dhammaantiin waxaad ku gogol xaadhay riwaayad aad u wanaagsan oo ku dhex taal Prague.
2. Saanad Saxon Switzerland ku taal, Jarmalka
3. Jacaylku wuxuu maraa balliga Lago Di Braies, Talyaaniga
Biyo buluug ah iyo dushooda buurood oo ka muuqanaya harada dhexdeeda, Aragtida harada di Braies ee ku taal koonfurta Tyrol ee talyaaniga ayaa midabayntaada ku midabayn doonta xasuus qurux badan. Talyaanigu waa cirka, marka lagu daro harooyinka xiisaha leh iyo buuraha, runtii waa lama huraan in la sharraxo sababaha badan ee harada noogu sareysa 5 kaalinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'piska' ee Yurub.
Paris waxay leedahay tiro aan la tirin karin jardiinooyin qurux badan iyo meelaha lagu tamashleeyo ee ku teedsan Seine. Meesha ugu wanaagsan ee lagu sawiray ee ku taal Paris waxay ku taal meel sare oo astaan ​​u ah Champs de Mars.
Waa dhul cagaaran oo weyn oo u dhexeeya arrondissement toddobaad iyo Eiffel Tower. Waxay ku habboon tahay sawirada buluuga ah ee Paris waxayna bixisaa kuraasta ugu fiican ee qorrax dhaca. Marka lagu daro muuqaalka muuqaalka, sidoo kale waa mid ka mid ah 10 aragtiyada ugu wanaagsan ee laga helayo Eiffel Tower ee ku yaal Paris.
Qoysas walba oo ku yaal Paris waxay u yimaadaan inay qoraxda qoraxda ama ay ku raaxeystaan ​​muuqaalka dayrta ee jardiinooyinka. Aad ayey u deggan tahay waxayna siisaa jawi wanaagsan oo lagu daawado nalalka habeenkii ee Eiffel Tower.
Waxaad raaci kartaa tareenka metro ama RER. Si fudud uga deg xarunta Champ de Mars-Tour Eiffel.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "5 Ugu Fiican Suuqyada Yurub" ee boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/?lang=so የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
jimicsi	picniceurope	PicnicinParis	picnicspotseurope	la qiyaasi karo	safarka xagaaga	SafarkaPrague	safarkaswitzerland